Jim Irsay nke Azụmaahịa | Martech Zone
Na Sọnde, Indianapolis Colts meriri Tennessee Titans ka ọ bụrụ AFC South Champions. Otú ọ dị, tupu egwuregwu ahụ, onye nwe Colts Jim Irsay gbara mgbasa ozi ahịa zuru oke na Twitter.
Ọ bụrụ na ịnọghị na nkọwa ahụ, ka anyị tụlee tweets Irsay site na Disemba 31st:
Imeri A PRIUS NA $ 4K — Na 1: 15 pm nke Sunday a, a ga-enwe nwa ojii Prius dọwara na ugwu ugwu mputa n'èzí n'ámá egwuregwu Lucas…
Irite mmeri na $ 4K-Abata ga-abụ 18 yrs ma ọ bụ karịa NA-eso @jimirsay na Twitter.com…
Imeri A PRIUS NA $ 4K — ONE ntinye kwa onye, ​​multiple ndenye disqualifies gị (ọ bụghị na-egwu egwu)!…
IKWETA Ahịa na $ 4K-Na 1pm a Sunday m ga-tweet ajụjụ. You nwere ike tinye site na tweeting azịza gị.
Imeri A PRIUS NA $ 4K — Ur tweet MUST nwere aha gị dị ka ọ na-egosi na ọkwọ ụgbọ ala gị ikikere na-agụnye @jimirsay NA #gocolts.
Ka anyị hapụ uru pụtara ìhè nke ụdị nkwalite a. Oge ọ bụla ị nyere onyinye bara uru, ị na-ewepụta ọtụtụ mkpọtụ na mmasị na ika ahụ. Na-ewusi iguzosi ike n'ihe ike. Make na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ obi ụtọ, na nwere ike otu onye tremendously obi ụtọ. Asọmpi na-adịkarị mma.
Ma otu ndị ahịa Colts mere ihe na-egbukepụ egbukepụ na mkpọsa a, ihe ga-adị oke ọnụ ma na-ewe oge iji mee ma ọ bụghị: Ha gbakọtara ndepụta ziri ezi nke Colts Fans na njikwa Twitter.
Cheedị echiche! Nnukwu ahia na-achọ ihe nchekwa data dị ọcha, nke ziri ezi, na-agafe agafe. Mmepe nke teknụzụ ọhụụ dịka Twitter pụtara na e nwere ụzọ ọhụrụ iji ruo ndị mmadụ, mana n'otu oge ahụ, ọ bara uru nke ukwuu inwe ike ijikọ ndị na-akwado ya na akaụntụ Twitter.
Were anya, dị ka ihe atụ, na onye ọrụ Twitter @ Nwabuezeigbo. Can nwere ike ịsị na ọ bụ nnukwu NFL onye ofufe naanị site n'ịgụ Tweets ya. Mana enweghi ụzọ ịmara onye ọ bụ, ebe ọ bụ na onye ọrụ a enyeghị aha na profaịlụ Twitter ya. N'ezie, ọtụtụ mmadụ na-eji aha nnabata, aha mbụ ma ọ bụ aha nick na ntanetị. Enweghị ụzọ dị mfe iji zoo aka na njikwa data niile ị nwere ike ịnweta mmadụ, dịka ịzụta akụkọ ihe mere eme, nchekwa data ahịa, wdg.
Ma ugbu a, Jim Irsay (na onye ọ bụla) maara na @ DeadStroke96 bụ George Ketchman. Ọ dị ka ọtụtụ narị mmadụ — ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku kwuru puku — ndị mmadụ jiri aka ha nye data dị ọcha, ziri ezi maka asọmpi a. Gaba na Twitter Search iji hụ maka onwe gị. (Can nwere ike ịchọ "#gocolts @jimirsay footballs" iji belata nsonaazụ ya.)
Otu n'ime ndị kasị mma isi mụbaa arụpụtaghị ihe bụ iji gbanwee ọrụ ndị ọzọ. Ndị Colts nwere ike iji ọtụtụ awa nyochaa ndị na-eso Jim Irsay niile, na-elele profaịlụ ha na tweets ha iji nwalee ma chọpụta aha iwu ha. Ma ọ bụ, ha nwere ike ịgba ọsọ otu asọmpi ha ga-agbanye, hapụkwa ndị mmadụ ka ha rụọ ọrụ ahụ n'onwe ha.
Ezi ọrụ, Jim Irsay na ndị otu ahịa Colts!
Tags: nwa ehijim irsaymarketing
Jenụwarị 3, 2011, elekere 3:20 nke abalị
Mana…. ọ bara uru $30,000? Na ha ga-eme ihe ọ bụla na data?
Jenụwarị 3, 2011, elekere 5:24 nke abalị
Ọ bụ ezigbo echiche… mana gịnị bụ ROI? Mgbe mbụ m gụrụ tweet gbasara nkwalite na Satọde @jimirsay nwere ndị na-eso ụzọ 18,000+. Achọpụtara m ugbu a ma ọ bụ 20,000+. Ọnụ ego ahụ ọ bara puku ndị na-eso ụzọ ọhụrụ abụọ?
Jenụwarị 3, 2011, elekere 6:11 nke abalị
Enwere m obi abụọ na ọnụ ahịa ahụ dị nso $30k. Anyị maara na ọ dịkarịa ala $4k na ego. Ọ ga-ekwe omume na ha nwetara ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ ọ bụla maka mgbanwe maka azụmaahịa ụfọdụ.
Ọ bụrụ na Colts jiri data ahụ, yabụ ee, ọ bara ezigbo uru $4,000. Ọ ga-ewe otu nnukwu ìgwè ọtụtụ izu iji gafee ndị na-eso ụzọ Irsay niile na ezigbo ndị mmadụ, nke ahụ agaghị ekpuchi ọtụtụ ndị ọrụ Twitter nke ị na-enweghị ike ikpughe njirimara ha.
N'ezie, enwere otu ozi ọzọ: Onye ọ bụla nwere ike nweta ndepụta a ugbu a, ọ bụghị naanị Colts. Nke ahụ kwesịrị ịgwa gị ihe ọzọ gbasara mkpọsa a.
Jenụwarị 3, 2011, elekere 10:37 nke abalị
Ị ga-etinyekwa aka n'ụgwọ 'otu ndị nwere oke' mgbe ahụ. Kwuo na ị nwere ike ịgafe mmadụ 1 kwa nkeji atọ, ma ọ bụ 3 otu elekere. Maka ndị na-eso ụzọ 20, ị na-ele ọrụ 20,000 mmadụ-awa. Tụfuo nke ahụ n'ọnọdụ ntinye data $1000 kwa elekere, ma ị nọ na $10 ọzọ maka ọnụ ahịa. Ugbu a ị laghachila $10,000 ma ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ bụ n'efu, $14,000+ ma ọ bụrụ na ọ dị na mbelata.
(Oh, na ị ka mma ka ha malite na ya taa tupu search.twitter.com kpochapụ ya niile n'ime ihe dị ka otu izu hahahaha! 🙂 )
Echere m na Irsay dị ukwuu na-ewu uzu, na-na ndị mmadụ na-ekwu okwu, wdg. M na-eche na anyị niile ga-ahụ n'anya ya nagide data dị ka ọ pụrụ na kwesịrị, ma m nnọọ n'ezie echeghị na ọ na-eme.
Gịnị bụ isi ebumnobi ya? Mee ka ndị mmadụ na-ekwu okwu na obi ụtọ banyere Colts (na ya), ma nọgide na-egosi na o nwere nnukwu ego ma nwee ike inye ihe. Ò nwere ihe ịga nke ọma na nke ahụ? Ee.
Jenụwarị 3, 2011, elekere 10:22 nke abalị
ROI abụghị naanị na ndị na-eso Twitter Steve. Enweghị ụzọ ị ga-esi tụọ ROI nke ihe na-agbada dị ka nke a. Ọ bụghị maka mmadụ ole na-eso ụzọ irsay nwetara ya banyere ihu otu nzukọ na-enweta mgbasa ozi n'obodo niile. Heck ọ fọrọ nke nta ka ọ baa uru maka ụlọ mmanya niile ha na-enweta site na geeks ahịa dị ka anyị. A na-eresị egwuregwu ahụ nke ọma tupu oge eruo ka ndị Colts enweghị ohere iji meziwanye ROI ha n'otu n'otu.
Ndị Colts nwere ike nweta ego ha nwetara site na tiketi… mana a na-enweta ntakịrị site na nkwado. Ndị nkwado na-akwụ ụgwọ maka ọnụọgụ buru ibu. N'adịghị ka ụlọ ọrụ a na-ahụkarị, ndị na-akwado egwuregwu egwuregwu na-arapara n'ahụ. Ya mere ajụjụ ka mma nwere ike ịbụ - kedu uru onye na-akwado Colts ga-eri ogologo ndụ…. na Jim Irsay mere onye ọ bụla na-akwado Colts site n'ime nke a? Echere m na o nwere ike. Ndị mmadụ na-agwụ ike nke otu mgbe niile… nke a bụ ọmarịcha mmegharị ahụ nke inyeghachi ntakịrị ihe.
Joe akpụkpọ ụkwụ
Jenụwarị 11, 2011, elekere 2:45 nke abalị
Ọ bụghị maka ROI, ndị na-eso ụzọ, ma ọ bụ ọnụ ahịa ya. Ọ bụ maka egomaniacal ramblings nke a billionaire nwere ego karịa uche. M pụtara n'ezie… ọ kwụrụ $1M maka ụbọ akwara Jerry Garcia. Ị chere n'ezie na ọ na-eche banyere $30k?
Ezie na m na-ekweta na ego na uche enweghị ihe jikọrọ ọnụ, m na-ejighị n'aka na m na-ekweta na irsay bụ egomaniacal. N'ọtụtụ ọnọdụ, irsay emeela ihe niile o kwere mee iji zere ìhè. M na-arụ ọrụ na ụfọdụ ndị nwere ọtụtụ kọntaktị na ya na ha agwala m na ọ bụ ihe ịtụnanya Ihọd nwere nnọọ nro obi. Ọ bụrụ na ịmee nyocha, ị ga-ahụ na ọ na-edobe ọtụtụ ndị ọrụ ebere na-aga ebe a na Indiana.
onye n'ezie meriri ụgbọ ala ?
Jenụwarị 3, 2011, elekere 3:32 nke abalị
Mụ na Brad na nke a, ụdị. Robby na-eche nnukwu echiche na Colts ga-etinye ozi ahụ. Enwere m obi abụọ na nke kachasị mma n'ihu ahụ na-ahụ ka ha nwere otu n'ime ihe kachasị njọ (n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị adị) na ọnụnọ ọha na eze maka otu pro. Ugbu a enyere ndị na-akwado ha aka ime ọtụtụ ihe ha na-arịọ ha n'ịntanetị na nke ahụ dị mma mana ugbu a na irsay na-atụgharị iyi nke mmụọ ya na-enyefe tiketi na ụgbọ ala apụtaghị na nzukọ ahụ amatala. Akụkụ nke asọmpi ahụ na-arụtụ aka na onye nwere ụfọdụ ihe ọmụma Twitter na-abanye na ntị Jim. Ikekwe Doug na enyi ya Pat Coyle nwere ike ịgwa ndị Colts okwu dị ka otu nzukọ karịa m. Uru ọzọ dị na nke a bụ maka ndị nwere ike ịkwado n'ọdịnihu. Toyota nwetara nnukwu ụlọ mmanya na nke a, n'agbanyeghị na ha nwere ike nweta enyemaka Jim na ndị na-ere ahịa mpaghara ha nwere ike ịkwalite ya ma tinye ya dịka ha nwere ike. Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-achọ ka ya na ndị Colts na-akpakọrịta ga-erichapụ ha na nkwekọrịta dị ka nke a. Ọnụ ego ndị Colts nwere ike ịbụ ihe ọ bụla maka ụgbọ ala ahụ ma ọ bụ belata nke ukwuu n'ihi mmekorita Toyotas na ndị otu ahụ (ụgbọ ala nwere ike na-eri otu n'okpuru $ 20k ma ọ bụrụ na ha akwụ ụgwọ ya) Ndị Colts dị ka otu ga-enwetakwu traction ma ọ bụrụ na ihe nrite ahụ bụ karịa. ahaziri gburugburu ha & ngwaahịa ha mana mgbasa ozi adịghị afụ ụfụ. Ọ bụ ihe dị mma ịhụ na tweet Irsay adịghị enyocha ya mana site n'ahịa ahịa m ka na-ahụ ọtụtụ ohere na ohere maka mmelite.
Jenụwarị 3, 2011, elekere 6:07 nke abalị
Ma ọ bụ ma eleghị anya, Robby nwere ire ya na ntì ya.
Ọ bụrụ otu a, egwu dị mma sir.
Jenụwarị 3, 2011, elekere 10:24 nke abalị
Jenụwarị 11, 2011, elekere 2:43 nke abalị
Ọ bụ billionaire. Ọ na-eji $30k na-ebili n'àkwà. N'ezie, ọ bụghị maka ego ahụ. Ọ bụ maka ego.
mara mma nke ukwuu m ga-ekwu.
Dịka iwu inyefe ụgbọ ala/ego nke Jim Irsay si kwuo, tweet kwesịrị ịgụnye aha gị ka ọ dị na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gị. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ maka ebumnuche ngwuputa data, echere m na ọ bụ iji gbochie ịghọ aghụghọ ule. O nwere oke otu-tweet-kwa-mmadụ; Achụpụrụ gị maka ọtụtụ tweet. Iwu "n'uju" kụda mmụọ ọtụtụ ịkọ nkọ site n'aka onye nwere ọtụtụ akaụntụ Twitter.
Jenụwarị 11, 2011, elekere 2:41 nke abalị
Enweghị m ihe mere m ga-eji kwere na ọ dị oke amamihe n'azụ nkwalite ahụ. Ihe mberede obi ụtọ, ma ọ bụghị ọgụgụ isi.
Jenụwarị 15, 2011, elekere 6:54 nke abalị
Ọ na-eweda onwe ya ala mgbe onye ama ama (@jimirsay) sonyere Twitter wee karịa ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ ọ were gị ọtụtụ afọ iji gbakọta… n'ime izu ole na ole!